कुदाउने हो होन्डा मङ्की ? मूल्य यति छ – Everest Dainik – News from Nepal
कुदाउने हो होन्डा मङ्की ? मूल्य यति छ
काठमाडौं, साउन २ । पर्याप्त माग नभएकाले पछिल्लो वर्ष होन्डाले उत्पादन बन्द गरेको मङ्की मोटरसाइकल पुनः उत्पादन सुरु गरेको छ । कम्पनीले होन्डा जापानको वेबसाइट मार्फत मङ्कीको नयाँ अवतार सार्वजनिक गरेको हो । पुनः उत्पादन भएको यो मोटरसाइकललाई कम्पनीले २०१७ को टोकियो मोटर शोमासमेत प्रदर्शन गरेको थियो । यस बाइकमा होन्डाले १२५ सीसी इन्जिन दिनेछ ।
जसले ७ हजार आरपीएममा ९.३ बीएचपी पावर र ५२५० आरपीएममा ११ एनएम टर्क दिन्छ । यसको डिजाइनिङ प्लेटफर्म पुरानो मोडलको नै रहनेछ र इन्जिन इन्जेक्शन टेक्नोलोजीसँग सुसज्ज्ति हुनेछ ।
५.६ लिटरको ईन्धन ट्यांकी दिइने यो वाइकको तौल १०७ किलोग्राम रहेको छ । होन्डा मङ्कीको नयाँ स्वरुपमा, एबीएस (एन्टि लकिङ ब्रेकिङ सिस्टम) हुनेछ । एलईडी हेडलाइट रहने यो मोटरसाईकल विश्वव्यापी रूपमा तीन वटा कलर भेरिएन्टमा आउने छ ।
होन्डाका अनुसार, होन्डा मङ्कीले ६७.१ किलोमिटर प्रति लिटर माइलेज दिनेछ । यो बाइकको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य ३ हजार ७ सय डलर रहने छ । यदि यो मोटरसाइकल भारत र नेपाली बजारमा आएमा मूल्य कति पर्छ त्यसका लागि भने प्रतिक्षा गर्नु पर्ने छ ।
ट्याग्स: Honda Monkey, मङ्की मोटरसाइकल पुनः उत्पादन
महिलालाई जिस्क्याउने २ जना पक्राउ
भारतविरुद्ध इश सोधीले बनाए कीर्तिमान, तोडियो पाकिस्तानी क्रिकेटरको रकेर्ड
‘सगरमाथा संवाद’बारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई ‘ब्रिफिङ’
राष्ट्रपति भण्डरीद्वारा प्याकुरेलको राजीनामा स्वीकृत
लगातार २७ घण्टा सामूहिक नृत्य गरेर अमेरिकाको रेकर्ड तोडिँदै
नेपाल आइडलमा सुदूरपश्चिमका कमल साेव, भोट दिन अपिल
बंगलादेशद्वारा पाकिस्तानलाई १४२ रनको लक्ष्य, यस्तो रह्यो हरिसको डेब्यू